Toerana misy an'i Puerto Rico: voafidy ho mpiara-miasa manentana ny fanahy
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Toerana misy an'i Puerto Rico: voafidy ho mpiara-miasa manentana ny fanahy
Fanondroana vao haingana no mampifanaraka an'i Destination Puerto Rico amin'ireo orinasa voafantina hafa izay mitazona fiaraha-miasa mahatoky ary manome serivisy miavaka amin'ny indostrian'ny hetsika.
Ny DMC Network dia nanambara fa ny Destination Puerto Rico dia notendrena ho mpiara-miasa amin'ny Inspirational BI WORLDWIDE ho an'ny taona 2018.
Destination Puerto Rico, Orinasa DMC Network, dia nekena tamin'ireto sokajy ireto:
Vita soa ny serivisy - Mpiara-miasa iray izay nanohana indrindra ny fandefasana programa eo an-toerana
Aza kivy mihitsy - Mpiara-miasa iray izay naneho faharetana sy fahavonona handeha lavitra mihoatra ny sarotra nandritra ny toe-javatra sarotra
Anisan'ireo fiderana nomena tamin'ireto sokajy ireto, Destination Puerto Rico dia nekena manokana noho ny fandrindrana tsara, ny fanarenana ary ny serivisy eny an-toerana nandritra ny rivodoza Maria izay namely ny toerana tamin'ny volana septambra 2017, iray amin'ireo tafio-drivotra ratsy indrindra niainana teto amin'ny nosy.
”Faly izahay fa manaiky ny Destination Puerto Rico, Orinasa DMC Network, ho mpiara-miasa amin'ny aingam-panahy. Ny fari-pitsipika avo lenta azon'izy ireo dia manampy anay hamorona traikefa lehibe ary hanome fotoana mahery ho an'ny mpanjifanay. Manantena ny hanohy ny fiaraha-miasa izahay. ” hoy i Paul Bergeron, filoha lefitra zon'ny Solutions Event ao amin'ny BI WORLDWIDE.
"BI WORLDWIDE dia iray amin'ireo masoivohon'ny fidirana an-tsehatra manerantany amin'ny indostrianay." hoy i Dan Tavrytzky, Tale mpitantana ny tambajotra DMC. “Ny fahazoana ny iray amin'ireo mpiara-miasa aminay dia fandresena lehibe ho anay. Faly indrindra izahay mahita ny Destination Puerto Rico notendrena ho sokajy ao amin'ny BI WORLDWIDE 'tsy milavo lefona' mihitsy.
"Ny fandehanana an-kilaometatra fanampiny ho an'ny mpanjifanay dia singa iray lehibe amin'ny marika DMC Network sy ny fomba fanaovana asa aman-draharaha. Nandritra ny fotoan-tsarotra, ny Destination Puerto Rico dia tena namirapiratra tamin'ny fomba nanohanany ny mpanjifany ary faly izahay fa ny fahaizan'izy ireo matihanina sy ny fahaizany amin'ny krizy dia nekena tamin'io fomba io. ”
Fanandramana vaovao tsy manam-paharoa
Air Kiribati dia manaparitaka $ 243 tapitrisa amin'ny fiaramanidina vaovao